Ungayivula Kanjani I-Dispensary Ngamadola Angaphansi Kwama- $ 50.
Ungayivula kanjani i-dispensary ezifundazweni eziningi ngaphansi kwama- $ 50 dollars.
Ezifundazweni eziningi ukuvula indawo yokulima insangu kubiza ngaphezu kwamadola ayisigidi ukuze kuvuleke umnyango ngenxa yemali ebizayo yamalayisense, izidingo zokuphepha, imali yentela, intengo yomkhiqizo, kanye nabasebenzi. Kunezindaba eziningi zezitolo zomama nezama-pops ebezikhishwe ngemisipha kulo makethe omusha ngenxa yezinkampani ezisekelwa yizigidi zamadola ezingena zikhokha kuze kufike ku- $ 1 ukuze nje APPLY! Kodwa-ke ngenxa yomthethosivivinywa wepulazi we-2019 ungavula i-hemp yakho IDelta 8 iTHC i-dispensary khona lapho ekhaya lakho engaphansi kwama- $ 50 dollars usebenzisa iRed Emperor Collective Affiliate Program.
Uhlelo lwethu lwebhizinisi olulula
IDelta 8 iTHC ingenye yamakhemikhali angamakhulu avela esihlahleni se-hemp, kepha ngokungafani ne-CBD, i-CBG, ne-CBD, le nhlanganisela ikunikeza okufana kakhulu ne-Delta 9 THC etholakala esitshalweni se-cannabis esisohlwini lomkhiqizo ohleliwe 1 uhulumeni wesifundazwe. Ngenxa yesikweletu sepulazi, uvunyelwe ngokomthetho ukuthengisa IDelta 8 iTHC imikhiqizo njengoba uvunyelwe ukuthengisa imikhiqizo ye-CBD, ngaphandle kokuthi izwe lakho lenze iDelta 8 THC ingekho emthethweni abanye abanayo. Kodwa-ke, njengomthengisi ohambisanayo, usengathengisela abangani nomndeni ezifundazweni ezisemthethweni, noma ngabe uhlala ezweni elivinjelwe noma cha. Ungaqala ngemikhiqizo embalwa bese uyithengisela abangane bakho bese ukhula kusuka lapho!
Isiteji 1 Izindleko zokuqala uhlelo lwe-Dispensary $ 49.00
Ngamadola angama-49.00 kuphela ongaqala ukuhola imali ezinkundleni zokuxhumana naku-inthanethi ngokutshela abangane bakho nabalandeli ngemikhiqizo yethu ye-CBD neDelta 8 THC Uthola isixhumanisi esihambisanayo esilandelwa iwebhusayithi yethu futhi noma kunini lapho kuthengwa khona uthola% 10 amaphesenti entengo ephelele yokuthengisa. Ungaphinda uqashe abanye abangane, amalungu omndeni, nabalandeli ukuthi bajoyine uhlelo lwethu lokubambisana futhi uthola amakhomishini ayi-10% kukho konke abakuthengisayo futhi.
Isiteji 2 Izindleko Zokuqalisa Uhlelo Lwamabhizinisi Asekhaya $ 249.00
Lokhu kufaka konke okungenhla, plus
1 Delta 8 THC Igobolondo Elilahlwayo 15 49.99
1 I-Delta 8 THC Vape Caridge 11 39.99
I-1 Delta 8 THC i-Emperor Ebomvu Gummies 49.99
1 1000 MG CBD Tincture Bottle izindleko zami 49.99
1 CBD Ukuphathwa Kwezinja 29.99
1 ukhilimu we-CBD olwa nokuguga 59.99
1 Ukuhanjiswa kwe-Gel Relief Gel Roll-On 39.99
1 CBD Ubuhlungu Patch 24.99
Inani eliphelele $ 344.92
Lolu hlelo lwenzelwe labo abafuna ukwenza imali ethe xaxa ngokuthengisa ngqo kubangani babo nasemalungwini omndeni wabo. Bangaki abantu obaziyo abathanda insangu futhi baqonde izinzuzo ze-CBD?
Uzokwazi nokuthola uhlu lwethu lwamanani aphelele lapho esikhundleni sokwenza amakhomishini ayi-10% ekuthengiseni ngakunye owenza noma yikuphi kusuka kumakhomishini angama-20 kuye kwangama-50 ngokuthengisa ngqo. Futhi ngaphezulu kwanoma yikuphi ukuthengiswa kwe-Intanethi, okwenzela wena noma abaxhumana nabo.
Ngabe ungahola malini usebenzisa Uhlelo lwethu Lokubambisana Lwemikhakha?
Inani Labahlanganyeli Ukuthengisa Ngenyanga Ingqikithi Yokuthengisa Izinzuzo Zesivumelwano Ngenyanga
Lokho kungabonakala njengezinhloso eziphakeme kepha khumbula isilinganiso semithi yokuthokozisa insangu esedolobheni eliphakathi nendawo yenza isilinganiso sesigidi ngenyanga ekuthengisweni. Bheka https://www.502data.com/
Idolobha laseWashington State Top Recreational Marijuana Dispensary Ngokuthengiswa Kwenyanga
Isiteji 3 Iwebhusayithi Yakho Yomkhiqizo kanye Nesitolo Sokuhlobisa Impilo
Umthetho we-Federal Marijuana ulungile ekhoneni, futhi manje sekungu-1 wakho ethubeni leminyaka eyikhulu ukuqala umkhiqizo wakho bese ufaka umkhakha omusha othokozisayo, futhi onenzuzo enkulu. Njengoba iCanada isemthethweni ngokuphelele futhi iMexico isanda kugunyaza insangu ezingeni likahulumeni kuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuba i-United States yenze into efanayo. Phakathi nendawo, sisendaweni emnandi neDelta 100 THC & CBD. Njengoba izifundazwe eziningi zingayivumanga insangu yokuzijabulisa efana neTexas, Florida, North Carolina, Alabama abavunyelwe ukuthenga insangu njalo ngokusemthethweni futhi bangazifaka ejele, bahlawuliswe, noma balahlekelwe yizingane zabo. Hhayi ngeDelta 8 THC, uma bengakafaki ukuvinjelwa kusemthethweni ngamaphesenti ayi-8 ukuthengisa impahla, futhi kudle NJENGE-CBD inqobo nje uma ingaphansi kwamaphesenti angu-100 eDelta 0.3 THC. Lokhu kusho ukuthi ungavula isitolo se-hemp eTexas bese uqala ukuthengisa imikhiqizo ye-CBD esemthethweni iTHC 9 & 8 namuhla. Izinkulungwane zosomabhizinisi zenza into efanayo ncamashi ezweni lonke manje. Bona: https://journalstar.com/news/local/crime-and-courts/theyre-not-doing-anything-illegal-lincoln-police-not-concerned-with-delta-8/article_3086ad5e-dc10-59cd-88cc-0f72cc67018b.html
Ama-CBD & Delta 8 Dispensaries ayavulwa ezweni lonke. Qala Manje!
Uma unesitolo sakho uzokwazi ukuthola izaphulelo zevolumu yethu eningi ezokunikeza umkhawulo wenzuzo ephakeme kakhulu, futhi ngokuhambisana nalolu hlelo, ungaqala umkhiqizo wakho wemikhiqizo ye-CBD ngewebhusayithi yakho ongathengisela ngayo abantu imikhiqizo ezweni lonke. Azikho izindleko zokuqalisa ezengeziwe zalolu hlelo mane uthenge imikhiqizo eminingi njengoba udinga ekhasini lethu le-wholesale.
Isigaba 5 Iwebhusayithi Yakho Yomkhiqizo kanye noma Isitolo Somzimba
Funda Kabanzi Ngezinhlelo Zethu
Qalisa Ibhizinisi Lakho Ngemikhiqizo Yakho Elebulwe Ngokumhlophe Esitolo Sakho Esiku-inthanethi. Yenza Umaki Wakho Embonini Elandelayo Yebhiliyoni.
I-DIY + DropShip
+ $ 220 Imali Yesikhathi Esisodwa
Faka ilebula emhlophe emikhiqizweni yakho
Siphakela Ukusungula Kwakho
Ukugcwaliseka & Shipping
I-Order Tracking Platform
Isitolo esisheshayo se-CBD
+ $ 599 Imali Yesikhathi Esisodwa
Sakha Isitolo Sakho Esiku-inthanethi
Ipulatifomu Yokuthengisa Ehambisanayo
+ $ 1250 Imali Yesikhathi Esisodwa
Uhlelo Lokuthengisa Lokuxhumana
Ipulatifomu Yentengo Esezingeni Eliphezulu
I-Cart Automation elahliwe
Iwijethi Yengxoxo Ebukhoma
Izindleko Eziphansi Zempahla
* Amaphetshana Wenzuzo Ephakeme
NGINGAKWAZI KANGAKI UKUTHENGISA NGAMUNYE?
Uzothola isabelo sakho senzuzo kukho konke ukuthengisa. Iningi lamakhasimende athenga i-CBD lisebenzisa isilinganiso esingaphezu kwama- $ 120, likunikeza ikhomishini ephakathi kuka- $ 60 kuya ku- $ 70. Noma kunjalo, ungasetha amanani akho bese wenza umehluko phakathi kwezindleko zakho zezimpahla nentengo yakho yokuthengisa.
NGABE LU UHLELO LWAMLM?
Cha, iCBDStartup.io ayihlanganyeli kunoma yiziphi izinhlobo zokukhangisa ezinamazinga amaningi wokukhangisa okuthengiswayo okuqondile. Asibambiqhaza ezinhlelweni ezilahlayo; wonke amakhomishini asuselwa ekuthengisweni kwangempela okuvela kumakhasimende akho.
INGABE NGIQHUBEKA UKUQHUBEKA AMA-ODA?
Cha, ngokoqobo konke okuhlobene nebhizinisi nokugcwaliseka kwenziwa yithi. Ukugxila kwakho kuphela ukushayela amakhasimende esitolo sakho esiku-inthanethi. Siphatha ukucubungula, ukuthumela, izintela nezinkokhelo. Akunakuthola lula kuwe.
INQUBO YOKUGUNYAZA ITHATHA ISIKHATHI esingakanani?
Sibuyekeza zonke izinhlelo zokusebenzisana ezintsha kungakapheli usuku lwebhizinisi olungu-1. Qiniseka ukuthi ufaka ukuthi yiziphi iwebhusayithi noma izindlela zokumaketha ohlose ukuzisebenzisa kwifomu lesicelo, ukuze uthole imvume ngokushesha. Sizokuthumelela i-imeyili eyamukelekile nemiyalo ngokushesha nje uma isicelo sakho sokusebenzisana sesicubunguliwe futhi savunywa.
Kuzokhokhwa ngokudluliswa kwebhange noma uhlole i-akhawunti yakho enikezwe ehhovisi lakho elingemuva, kwizimali zase-US. Ukuthengiswa okwenziwe kusukela ngomhla ka-1-15 kuzokhokhwa ngomhla ka-16. Ukuthengisa kusukela ngomhla ka-16-31 kuzokhokhwa ngomhla ka-1.
NGABATUMELA IZIVAKASHI KUWE?
Cha, izinhlelo zethu azifani nohlelo lokuhambisana lapho. Uzothola iwebhusayithi yakho ukuze uyimakete. Ingxenyekazi yethu ifaka nemikhiqizo yakho enelebula elimhlophe. Ngakho-ke uzobe umaketha iwebhusayithi yakho ngemikhiqizo yakho ye-CBD.
Ngikulandela kanjani lokho engikutholile?
Sinikeza izibalo zesikhathi sangempela ekuthengiseni ngedeshibhodi yakho yokuphatha. Mane ungene ngemvume kuwebhusayithi yakho bese uhlola imininingwane yokuthengisa nezibalo ngaphakathi kwedeshibhodi yakho futhi uzokwazi ukubona yonke i-oda elilodwa, ikhasimende, ikhomishini etholwe nokunye okuningi…
INGABE UNENQUBOMGOMO YEMEYILI EYI-BULK?
Ukuthumela i-imeyili yanoma yiluphi uhlobo kulabo abangazange bacele ama-imeyili kwaziwa njenge-SPAM. Asivumeli noma yiluphi uhlobo lwe-imeyili noma iqembu le-spamming. Sifaka izinhlu zokuposa ezingakhethi ukungena encazelweni yethu yokugaxelwa kwe-imeyili ngobuningi. Uma kwenzeka sithola ukuthi yimaphi ama-akhawunti abambisene nawo ahilelekile kwizikhangiso ezingacelwanga ze-imeyili noma zeqembu lezindaba, sizoyivala i-akhawunti futhi sivale yonke imali ekhokhwayo yekhomishini esalindile. Sikhuthaza abaxhumana nathi ukuthi basebenzise noma yiluphi uhlobo lokukhangisa online abafisa ukulusebenzisa, ngaphandle kwe-imeyili eningi kanye nogaxekile beqembu lezindaba.